Tomb - Arọ Abụọ na Nkọwa | Nkọwa Okwu - Nkọwa Okwu
DREAM DICTIONARY Tomb - Ihe nnọchianya abụọ na nrọ
AK DKỌ ỌR D
Tomb - Arọ Abụọ na Nkọwa
Nrọ: .B. B C D B. F G H M J .B. L M N Ma ọ bụ P Q R S T U V N’ime X Na Nwere
PEEJI NKE 1
T - Kwere
Ili - Abụọ
( lee Ebe a na-eli ozu, Ọnwụ )
Ihe ngosi nke ịlọ ụwa, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ tọgbọ chakoo. E wezụga akụkọ banyere Ndị Kraịst banyere mmeri Kraịst meriri ọnwụ, ndị Celts oge ochie na-eli ndị mmadụ n’ili iji chere ịdị adị ọzọ.
Enwere ihe dị n'ime ili ahụ? Ọ bụrụ otú ahụ, chee echiche banyere onwe gị nke ọ ga-abụ na i lie ma ọ bụ nke ị chọpụtara n'oge na-adịbeghị anya.
Tombs nwekwara ike ịnọchite anya oge gara aga nke ihe a kpọrọ mmadụ na njikọ anyị na ndị nna ochie ochie. Honoredkwanyela njikọ a ùgwù n'ụzọ ụfọdụ n'oge na-adịbeghị anya? Ọ bụrụ na ọ bụghị, nrọ a nwere ike ịkpọ gị ka ị gaa na ili ozu ihe atụ ebe ị nwere ike ịchọpụta oge gara aga dịka onye otu mmadụ.
Akụkụ nke onwe, ọgụgụ isi, ma ọ bụ Mkpokọta Mkpokọta nke eleghara anya ogologo oge ka ha wee nwụọ ma lie ya n'ụzọ ihe atụ.
Ihe nnọchi akpa nwa ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị gburugburu.
( lee Ihu, Ọnụ, Ezé )
Ngwá Ọrụ nrọ
( lee Ax, Hammer, Nails )
Ihe ị na-ewu ma ọ bụ na-ebibi. Nke a nwere ike ịpụta njirimara onwe onye, ​​mmekọrịta, ọrụ, na ihe ndị ọzọ.
Ikike na ihe omuma nke na-ebi n'ime, ma apuru itinye ha n'ọrụ nke oma.
pisces nwoke na nwanyi nwanyi nwere obi uto
Amamihe, ezi uche, na mmụta. Inwe ngwá ọrụ na ịmara otu esi eji ya nke ọma bụ ihe abụọ dị iche. N'otu aka ahụ, ịmata ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị maka ezigbo ọrụ chọrọ ọzụzụ na ezi uche. Yabụ, kedụ ngwa ọrụ ị na-achọ itinye n'ọrụ gị ugbu a? Your̀ zụlitewo nkà gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị?
( lee kandụl, ọkụ, ọkụ )
Metaphorically 'ebu ọwa' maka mmadụ ma ọ bụ ọnọdụ.
Ìhè enwetara iji na-agagharị n'ọchịchịrị gbara gị gburugburu.
Ọkụ ahụ ọ na-amụnye ọkụ? Ọ bụrụ otu a, nke a nwere ike igosi ụdị mbido ọ bụla dị mkpa, dịka a ga-ekwupụta mmeghe nke Egwuregwu Olimpik.
Nrọ ndị a na-atụ banyere ọwa, n’ozuzu ha, gụnyere ọkụ. Mụta ihe niile banyere Isi nke Fire ya mere i nwere ike imekwu omimi banyere nrọ gị!
( lee Ọdachi )
Iji ghọtakwuo nrọ gị banyere oke mmiri ozuzo, ọ nwere ike inye aka ịghọta akara na nkọwa nke Element of Air .
Mbe - Anya Nrọ
( lee Anumanu )
Mụta ihe niile banyere Mmụọ, Totem & Ike anụmanụ !
Mbe nke na-abanye n'akịrịkọ ya na-echebe onwe ya ( lee Armor ). Kedu ihe ị chere na ọ dị mkpa izobe?
N’akụkọ ifo ndị China na nke Hindu, mbe na-eburu ụwa n’azụ ma na-egosipụta ntachi obi. Olee ibu ndị ị na-ebu bụ nke ị chọrọ nkwado?
Na Taoism, nke a bụ akara nke ike na amụma. Ka o siri dị, mbe na-egosi na nrọ gị nwere ike ibu ụzọ kọwaa ihe ime mmụọ dị mma.
Site na akụkọ banyere Oke bekee na Mbe, ihe okike a nwere ike bụrụ akara nke ịnọgidesi ike na nrọ gị ( lee oke oyibo ).
Japanese: Onye ozi sitere na chi nke oké osimiri, nke dị ka akwụkwọ akụkọ sitere na ụbụrụ gị, nke na-emetụbeghị. Lelee ma gee ntị nke ọma!
( lee nrịgogogoro na mbara igwe, mbara ihu, ịrị, ubube, steepụ )
Freudian: Ihe oyiyi phallic.
N'ịbụ onye a napụtara n'aka ụlọ elu: Inweta nnwere onwe echere ogologo oge site na nsogbu ma ọ bụ ọnọdụ dị ka onu. Mgbe mgbe enyemaka a na-esite n’aka onye ị na-ewere dị ka onye dị mma, ma ọ bụ onye nwere mmasị kasịnụ n’obi gị.
Ebee ka ị nọ? Ọ bụrụ n ’elu ụlọ elu ahụ, kpachara anya ka ọ ghara iji ọdụ́ mee ya, ka echiche gị wee ghara ịda na nke bụ eziokwu.
Na Tarot kaadị pụtara , Kaadị elu akara mbibi na mbibi, na-ebute onwe ya mgbe mgbe.
( lee Egwuregwu )
Nrọ banyere ihe egwuregwu ụmụaka nwere ike ịpụta na onwe gị dị elu na-echetara gị ka ị hapụ nwatakịrị n'ime ka ọ pụta kpọọ.
Ihe nnọchianya dị mkpa n'ụdị nrọ a bụ ị toa ntị na ụdị egwuregwu ụmụaka ị hụrụ mgbe ha nọ na nrọ wee tụgharịa uche n'ọnọdụ ndị dị na nwata mgbe ejikọtara gị na ihe ụmụaka ji egwuri egwu. Ndị a nwere ike ịbụ ụmụaka eji egwuri egwu echetara echefu site n'oge ntorobịa gị (oge obi ụtọ), ma ọ bụ nke ị gụruru agụụ ka nwata (mmetụta nke ụkọ)
Egwuregwu ụmụaka ọ bụla a tụrụ anya ha nwere ike ịpụta isi ihe dị iche. Dịka ọmụmaatụ, ịhụ nwa bebi nkịrịka akwa nwere ike igosi na, n'ọnọdụ a, ọ dị gị ka enweghi ọkpụkpụ ma ọ bụ nkwụsi ike. Truckgbọala ọkụ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ndụmọdụ iji gbanyụọ ọkụ ihe atụ nke na-agba. Mwube ụlọ na-egosipụta nrụpụta onwe na ntọala ntọala, akwụkwọ agba agba ABC nwere ike gosipụta mkpa ọ dị ịlaghachi na 'isi' ọzọ, kama itinye uche na frill.
Nrọ maka ụgbọ oloko nwere ike ịnwe akara na nkọwa ndị a:
Nnwere onwe, karịsịa n'ihe gbasara ebumpụta ụwa.
Freudian: Ihe ngosi nke nwoke amụ, nke kachasị ma e jikọtara ya na onyonyo ọwara.
Yiri ugbo ala ndi ozo n’usoro imeghari na uzo ( lee Bus, Car, Nyịnya ).
Cargbọ ọ bụla nke ụgbọ oloko ahụ nwere ike ịnọchite anya akụkụ nke onwe gị, gụnyere ikike zoro ezo, ihe ọmụma, ụjọ, olile anya, na ncheta. Yabụ, ịgagharị ụgbọ oloko na-anọchite anya nyocha na njikọta nke ụfọdụ akụkụ ndị a. Iji maa atụ, inyocha caboose nwere ike ịbụ ịkọwapụta mmetụta gị banyere ọnwụ ma ọ bụ njedebe.
( lee Ọbara )
Nrọ tọrọ atọ
( lee onu, gbapu )
( -ahụ site mode nke ationgbọ njem, Journey )
N'ịchọ mgbanwe nke mma na ume ọhụrụ n'ọnọdụ. Oge ụfọdụ ka itolite n’ezie, ị ga-ahapụ ebe izu ike.
Nnwere onwe, ntọhapụ, na ịchọpụta onwe onye. Getpụ apụ na-enye gị ohere ịhapụ ihe oyiyi na atụmanya ndị ọzọ ka i wee nwee ike iwuli ntọala nke onwe gị maka ibi ndụ.
Mmalite nke ọchịchọ onwe onye nke chọrọ ụfọdụ ụdị echiche ma ọ bụ nke anụ ahụ 'njem' gaa n'akụkụ akụkụ nke onwe ma ọ bụ nke ọhụụ, n'otu n'otu.
Enwere ike OBE (Ahụmahụ Ahụ Ahụ) ( hụ Nrọ, na-efe efe ).
( lee ihe mgbe ochie, olulu, gold, nke m, ọlaọcha )
Onyinye, onyinye, na ikike dị n’ime gị nke na-echere nchọpụta.
Ndị enyi, ndị anyị hụrụ n'anya, na ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa ná ndụ.
Ọganihu a na-atụghị anya ya nke na-abịa site na ikuku ikuku.
Na-egwu ala miri emi ka ị ghaghachite na ihe ndapụta ihe, Nnukwu Onwe, ma ọ bụ Mkpokọta.
Tụlee akụ nke ọ bụla maka akara ngosi ọzọ. Iji maa atụ, ịtọghe okpueze ọla edo nwere ike ịnọchite anya iburu ọrụ gị dị ka onye na-achị ọdịnihu gị, na ịchọta eriri pel nwere ike bụrụ akara nke ịgbaso olu amamihe maka nsonaazụ ọma.
( lee ụdị, Ọhịa, Mkpụrụ, Mkpara, Mkpisi, Wand )
Usoro ezinụlọ (dịka, 'ezinụlọ ezinụlọ').
Nnwere onwe ime nhọrọ na ikike ịhọrọ (rịba ama ogige Iden).
Ndụ, ihe ọmụma, na amamihe. Ọtụtụ ọdịbendị nwere akụkọ ifo nke Osisi Ndụ, gụnyere nke ndị Hibru oge ochie, ndị Asiria, ndị Babịlọn, na ndị Norse.
Osisi nke onwe. Kedu ka mgbọrọgwụ na mkpụrụ osisi gị si aga?
kedu ihe ike ndọda na neptune
Nbuputa nke onwe gi, ma obu meziwanye ntọala gi site na iwetu mgbọrọgwụ siri ike.
( lee Atọ, Mmiri, Ngwá Agha )
Ihe ochie: Njikọ nke Chineke na nke chi atọ n'ime otu. Site na njikọ a, a na-amụpụta ike okike dị egwu.
Alchemical: Ihe nnọchianya ọzọ maka mmiri. Rịba ama na ndị Greek na chi ndị Rom bụ Poseidon na Neptune na-esekarị foto na-ejide otu mkpịsị aka ha na-anọchite anya ọchịchị ha n’elu mmiri na ihe niile bi n’ime ya. Ya mere, nrọ a nwere ike gosipụta mmetụta ọhụrụ nke ịchịkwa mmetụta gị.
( lee Bridge, Fairy )
Gụọ ihe niile banyere Akara Dị Nsọ na Mkpụrụ Ifuru ...
Nrọ banyere tulips nwere ike inwe akara ngosi mmụọ na ihe ndị a:
Na akara ifuru, tulip na-anọchite anya mmụgharị mmụọ n'ụzọ kachasị mma! Na nke a, nrọ banyere tulips bụ ihe mgbaàmà na ị na-amalite oge ọla edo na ndụ gị.
Nrọ nke tulips bụ nbudata na nduzi mmụọ anyị na ndị mmụọ ozi na-eme ka anyị mata ịtụ anya obi ụtọ na ọ joyụ bụ otu ụzọ iji mejupụta mkpụrụ obi anyị.
Tulips bụkwa ihe nnọchianya nke ịhụnanya romantics na-enweghị olileanya jikọtara ntụkwasị obi na ịdị mma. Nke a nwekwara ike ịbụ na-ezo aka ihe dị mfe dị ka nsusu ọnụ na-abịa n'ụzọ gị ma ọ bụ ihe dị ka ndụ na-agbanwe dị ka afọ ime.
Tulips nwere ike ịpụta na ọ dị mkpa ka ị mara mmetụta gị. Ọ bụrụ na ịnagide ọnọdụ nnyapade ọ kacha mma ịdọghachi ọkụ gị ma zere ọgba aghara ọ bụla na-adịghị mkpa. Ugbu a bụ oge imere onwe gị nke ọma, ebe ọ bụ na ndị kacha gị nso ga na-amasị gị ma na-asọpụrụ gị. Njem ime mmụọ a ga-abụ ihe na-enye ume ọhụrụ, na-eme ka ike gwụ gị na 'ọhụụ ọhụụ'.
Ọ bụrụ na ọkụ apụta na njedebe nke ọwara ahụ, nke a na-egosipụta olileanya.
Njem njem nke ịchọta onwe gị
Freudian: Nrọ agụụ mmekọahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ụgbọ oloko na-aga n’olulu.
Ebe ọ bụ na ọwara na-apụtakarị n'ime ugwu ma ọ bụ n'ụwa, ha nwere ike ịbụ ihe nnọchianya afọ nwa ọzọ, nke usoro ọmụmụ na-agbanwe na mgbanwe onwe onye.
( lee Blue, Crystals, Gems, ọla, Nkume )
Mụta ihe niile banyere ọgwụgwọ na ihe omuma nke kristal , nkume na nkume dị egwu.
Nọgide na-enwe nguzozi gị na mmetụta uche ọbụlagodi na ọnọdụ uche n'oge nsogbu. Na Middle Ages, a họọrọ turquoise dị ka ọtụ ọfụma iji gbochie ndị na-agba ịnyịnya ịdapụ na ịnyịnya.
Imeri negativity site na mpụga isi mmalite. Buddha jiri turquoise merie ajọ anụ mmiri na akụkọ ifo ndị Ọwụwa Anyanwụ.
N'etiti ndị Turkey, ọchụnta ihu ọma.
Arabic: warningdọ aka na ntị banyere ihe egwu na-abịanụ. Nkume a na-eme ka onye nwe ya mata nsogbu site na ịgbanwe agba.
( lee Satellite Efere, Redio, Ekwentị )
Ngosiputa nke uche gi banyere ihe omuma a na ihe omuma ya.
Banye n'ime echiche ole, omume, echiche ime mmụọ, na ihe ndị yiri ya. Lee anya ịhụ ihe onyonyo pụtara na TV maka nghọta ọzọ.
Ikekwe ị nọrọla oge dị ukwuu n'oge na-adịbeghị anya ị bụ 'ndina ndina.' Gbalịa ịgụ akwụkwọ dị mma.
Ọ bụrụ na TV na-egosi oghere, nke a na-egosi ụfọdụ ụdị nsogbu na njikọ ma ọ bụ nnabata. Na-ege ntị n’ezi ndụmọdụ sitere n’aka ndị ọzọ? Something ji ihe atụ ma ọ bụ onye ọ bụla 'gbanyụọ' gị ihe atụ, wee si otú ahụ gbubie njikọ ahụ? Are na-emeghere ozi nke Eluigwe na Ala?
Nrọ iri na abụọ
( lee Onu Ogugu )
Njedebe nke ike, usoro, na okirikiri. Ọtụtụ mbido n'ime ihe omimi nke esoteric na-ewere ọnọdụ otu afọ na ụbọchị (maka ọnwa iri na abụọ) mgbe ịmalitechara ọmụmụ ihe.
Oge ọ bụla na-agagharị agagharị (rịba ama na e nwere awa 12 akara na ihu elekere na ọnwa 12 n'otu afọ).
Ọnụ ọgụgụ nke ihe ọmụma. Nke a nwekwara ike bụrụ 'ah ha!' nke ahụ na-eme mgbe a ghọtachachara ihe siri ike nghọta.
Nrọ maka Ọnụ Ọgụgụ nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na onwe gị dị elu na-agba gị ume ịmụ banyere Nọmba na nọmba dị nsọ nke Ọnụ Ọgụgụ .
Ọzọkwa, dị njikere iji nke anyị Onye na-eme ihe onyo onyonyo ma chọpụta ụzọ ndụ gị, akara aka, mmadụ, mkpụrụ obi na ọnụọgụ ọrụ!
nwanyị taurus nwanyị scorpio nwoke na akwa
Nkewa ma ọ bụ ịdị n'otu nke na-ebute ike ka mma ma ọ bụ adịghị ike.
Duality, nsogbu, ambivalence, ma ọ bụ enweghị obi eziokwu (dịka, ịbụ 'ihu abụọ').
Mmekọrịta; ikike abụọ na-esonye iji meziwanye nke ọ bụla ma mepụta ịdị n'otu siri ike (dịka di na nwunye ma ọ bụ azụmaahịa).
Gụọ ihe niile banyere Numerology pụtara nke 2 ...
mee pisces na capricorn mee ezigbo egwuregwu
mee libra na aries nwere ofuma
gịnị mere leo na sagittarius dakọtara
libra nwoke na aquarius nwanyi na mmekorita
ihe mbara ala dị na retrograde taa